Ndakasvirwa neMukwasha wangu Musango! – Makuhwa.co.zw
Ndakasvirwa neMukwasha wangu Musango!
Paiva nemukwasha ainzwira ambuya vake suggar, akafunga kushanyira ambuya apa ainge aita plan neshamwari yake kuti azogona kusvira mbuya yake.
Mukwasha uyu akaudza mumwe wake chinangwa chake chekuda kusvira ambuya. Mukwasha told his friend kuti kumusha kwavazoenda kune Sango rinoera. The plan was shamwari yake azohwanda musango iri then kana ambuya vakuperekedza mukwasha iye shamwari ashevedzera seSango rionera.
Mukwasha semunhu aienda kwa ambuya vake akatengawo girosari, sekuronga kwavaviri mukwasha neshamwari yake iya vakaenda, sahwira vaya vakazohwanda muSango sekurongwa kwazvaive zvaitwa. Mukwasha akazosvika kwaambuya vake vaya zuva ratopinda muna amai varo. Akaudza ambuya vake aida kutodzoka zuva iroro sezvo aidiwa kubasa the following day,aifanira kudzoka nepasango riya rinoera sezvo paiva ndipo, pedyo. Vakazoperekedzana zvavo asi ambuya aityira kuti mukwasha akazoenda oga nepasango angazongosangana nezvemo naizvozvo vakatoita zvokumuperekedza.
Vavapakati pesango vakanzwa izwi richishevedzera zvine mutsindo richiti SANGO! SANGO,MIRAI!! Ambuya vakapindwa nekutya vakati ,’Mukwasha itai zvose zvinenge zvarehwa, sango rino ronoera !’ Mukwasha akaratidza kushushikana asi nechemumoyo aitofara, Sango rakashevedzera zvakare,SANGO,SANGO ,KURURAI HEMBE MUSARE
MAKASHAMA!!!. Mukwasha akanyepedzera kumboda kuramba ambuya vakati ‘mukwasha sango rinoera itai zvarareva nekukasika! Apa ambuya yaiva yatoshama, mukwasha akazokururawo nekukasika.
Sango rakashevedzera ,’SANGO SANGO , SVIRANAI!!. Ambuya vakabva vabata mukwasha wavo muchiuno iye ndokubva abatirawo svine mutsindo sezvo mboro yake yainge yamira kare. Mukwasha akasvira ambuya vake zvine mutsindo musi uyu.Vari pakati Sango rakashevedzera ‘SANGO SANGO CHIREGERANAI! Mukwasha azozvomora zvake mboro yake asi aiva atotundira mukati kare.
Sango rakazoshevedzera rikati ‘SANGO SANGO ,SANGO RINODAWO! Apa ambuya vakaramba vakavhura beche shamwari wemukwasha akasvirawo.Apedza akashevedzera zvikanzi Sango, Sango, Sango rakwana chiendai kwake kwake. Ambuya vakabva vadzokera kumba kwavo mukwasha neshamwari yake vakabva vadzokera.
Do you think ambuya vakaudza mwanasikana wavo zvainge zvaitikita….
Related Topics:Ndakasvirwa neMukwasha wangu Musango!